Famaritana fitsapana - Hengtai (Hong Kong) mizara Co., Ltd.
Hamarino fa mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa ny vokatra entin'ny orinasa, manome fototra hijerena ny vokatra ary hiantoka ny kalitaon'ny vokatra.
Ity fenitra ity dia mihatra amin'ny vokatra modely TFT novokarin'i XX.
Masinina fandrefesana herinaratra, fanandramana fitsapana, fitaratra manalehibe, jiro fluorescent, caliper vernier
Drafitra santionany ary zahao ny toetry ny tontolo iainana
Ny sehatry ny famokarana (na ny fizotran'ny QC) dia manao fizahana feno ho an'ny fizahana fizahana tarehy sy fitsapana fampisehoana herinaratra, ary ho an'ny fandrefesana habe na fizahana manokana, ny santionany voalohany amin'ny maodely tsirairay dia nalaina tahaka sy notsapaina 5pcs.
Ny haben'ny kalitao dia mirefy 5 pcs ho an'ny santionany voalohany amin'ny maodely tsirairay, ary mandray ny drafitra santionany indray mandeha GB / —2012 ho an'ny fizahana endrika ivelany ary ny ambaratonga fanaraha-maso ankapobeny dia II.
Haavo tsy mendrika Haavo azo avela （AQL） Fanombanana fenitra kalitao mendrika
Tsy fahampiana lehibe Raha tsy tomombana ny habeny dia mahazo valiny 1 ny 0
Ny mpanadihady dia mila manao peratra elektrostatika sy vatan-tsivalana valo amin'ny tanana roa. Raha LCD tsy misy polarizer mifamatotra izany dia tokony hitafy rantsan-tànana ny rantsantanana rehetra.
Ny mpandinika dia afaka manamarina maso na mampitaha amin'ny latabatra fampitahana sarimihetsika.
Azafady mba jereo ny santionany amin'ny fanandramana elektrika amin'ny alàlan'ny fizahana fanandramana sy ny efijery fampisehoana.
Ny elanelana misy eo amin'ny mason'ny inspektera sy ny vokatra dia 30 ~ 40 cm. Ny zoro fizahana fizahana dia ± 15 degre eo amin'ny lafiny anoloana ny tontonana fisehoana mitsivalana ary ± 45 degre eo amin'ny tampon'ny aloha amin'ny tontonana fampisehoana marindrano (jereo ny sary etsy ambany)
Jiro amin'ny tontolo iainana: 800 ～ 1200LUX ho an'ny fizahana maso
Temperatura amin'ny tontolo iainana: 25 ± 5 ℃
Hamandoana: 25 ~ 75% RH
Hamarino ny entana
(1) Famaritana ny lesoka teboka ateraky ny takelaka anatiny.
a) Toerana mamirapiratra: teboka mamiratra sy tsy miovaova hita eo amin'ny LCD eo ambanin'ny maodely mainty.
b) Teboka maizina: Ao amin'ny sary mena, maitso ary manga madio, teboka mainty mitovy habe aminy no miseho amin'ny LCD.
c) isa 2 mifanila = mpivady 1 = isa 2.
Asehoy ny fanamarinana
zavatra Description Habetsahana azo ekena MAJ MIN
Zava-nisongadina kianjoanjo F3 √
Teboka roa mifanila N≤0
elanelana Elanelana farany ambany misy teboka mamiratra roa 5mm
toerana maizina kianjoanjo N4 √
Teboka maizina sy teboka mamirapiratra tanteraka F6 √
elanelana Elanelana farany ambany misy teboka mamirapiratra roa (teboka mainty) 5mm √
Hevitra misongadina kely D≤can be ignored，<D≤, N≤4,spacing≧5mmD（Point diameter） √